TCL ga - eweputa ekwentị izizi nke ya na IFA 2019 | Gam akporosis
TCL iji kpughee aha ekwentị izizi mbụ na IFA 2019
IFA 2019 na-ewere ọnọdụ, anyị nwere ike ịhụ na ọtụtụ ụdị ga-anọ na mmemme a. TCL bụ otu n'ime ụdị ọhụụ kachasị ọhụrụ iji gosipụta ọnụnọ ya na mmemme ahụ n'isi obodo German. N'okwu gị, ọ ga-abụ ihe ngosi dị mkpa, n'ihi na ị ga-ahapụ anyị na nke gị mbụ ekwentị. Nke izizi ịmalite n’ahịa gị.
TCL nwere ụlọ ọrụ dịka Alcatel, nke ha ga eji eweputa ekwentị mpịachi na 2020. Mana oge a ha na-akwado iji bido ihe ga-abụ ngwaọrụ mbụ ha n’okpuru akara nke ha. Anyị ga-enwe ike ịmata ya Izu a na mbipụta a nke IFA.
Ọ ga-abụ na Septemba 5Tọzdee a, mgbe anyị nabatara ekwentị mbụ nke TCL. Ya mere, anyị ga-echere obere oge iji chọpụta ihe niile gbasara ngwaọrụ a site n'aka ndị nrụpụta. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ ekwenyela na ha ga-ahapụ anyị ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ na ihe omume a na Berlin.
Ebe ọ bụ na mgbakwunye na ekwentị, anyị nwere ike ichere a ọhụrụ mpịachi ihuenyo prototype, obere ihuenyo na ngwaọrụ nke ga-enye anyị nlele nlele nke ihuenyo 100-inch, mana ya na ugogbe anya maka anwụ. Ya mere, ika ahụ na-achọ ihe ijuanya na ihe omume ahụ.
Anyị amaghị ihe ọ bụla gbasara ama ama mbụ nke ya nke TCL ga-ahapụ anyị. Enweghị nkọwa ọ bụla ekpughere. banyere nkọwa ya, enweghị foto gbasara ya. Ya mere, anyị ga-echere ruo Tọzdee ịmara ihe niile gbasara ya. Ọ gwụla ma enwere ọnya nta tupu ụbọchị ahụ.
O doro anya na IFA a 2019 kwere nkwa ihe omume dị oke mkpa maka TCL. Ebe ọ bụ na ha amaja ugbu a ẹkedori a ekwentị n'okpuru ha onwe ha ika. Anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na ụdị a nwere mbido zuru ụwa ọnụ ma ọ bụ na ọ bụghị, ma ọ bụrụ na anyị ga-enwe ike ịzụta ya na Spain na oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » TCL iji kpughee aha ekwentị izizi mbụ na IFA 2019
Etu esi tinye mbinye aka na ozi ịntanetị gị na Gmail maka gam akporo